यहोवाका साक्षीहरू बेला-बेलामा किन आफ्नो धारणा बदलिरहन्छन्‌?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उइघुर (सिरिलिक) उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एस्टोनियन कम्बोडियन करेन (गः) काजाक किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्यामा क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक चोल जर्जियन जर्मन जापानी जाभानिज जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली डच डेनिश ताजिकी तेलगु तोजोलबल त्वी थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फान्टे फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बाटाक (टोबा) बास्क बुल्गेरियन बोस्नियन भलेन्सियन भियतनामिज भेन्डा मझतेक (हुआट्ला) मले मल्यालम माम माया मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लो जर्मन वेल्श शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
हामीले गरेको विश्वास बाइबलसित पूरै मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर हामी जाँचिरहन्छौं। त्यसैले कहिलेकाहीं बाइबलको कुरा पहिलेभन्दा अझ राम्ररी बुझेपछि हामी आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्छौं। *
यस्ता परिवर्तनहरू हितोपदेश ४:१८ मा बताइएको सिद्धान्तसित मेल खान्छ: “धर्मीको चाल बिहानको उज्यालोजस्तै हो, त्यो मध्यदिन नहोउन्जेल झन्‌-झन्‌ चहकिलो हुँदै जान्छ।” घाम चम्किंदै गएपछि दृश्यहरू बिस्तारै प्रस्ट हुँदै जान्छ। त्यसरी नै परमेश्वरले पनि ठीक समयमा बिस्तारै-बिस्तारै सत्य प्रकट गर्नुहुन्छ। (१ पत्रुस १:१०-१२) उहाँले ‘अन्तको समयमा’ झन्‌ धेरै त्यसो गर्नुहुनेछ भनेर बाइबलमा भविष्यवाणी गरिएको छ।—दानियल १२:४.
हाम्रो धारणामा यस्तो परिवर्तन गरिंदा हामी छक्क पर्दैनौं अनि बेचैन पनि हुँदैनौं। पहिला-पहिलाका परमेश्वरका सेवकहरूले पनि गलत सोचाइ राखेका थिए अनि गलत कुराको आशा गरेका थिए। तर पछि तिनीहरूले आफ्नो सोचाइ बदल्नुपऱ्यो।
मोशाले परमेश्वरले तोक्नुभएको समय आउनुभन्दा ४० वर्षअघि नै आफूलाई इस्राएल राष्ट्रको उद्धारक ठाने।—प्रेषित ७:२३-२५, ३०, ३५.
प्रेषितहरूले मसीहको मृत्यु र उहाँको पुनर्जीवनबारे गरिएको भविष्यवाणी बुझ्न सकेका थिएनन्‌।—यशैया ५३:८-१२; मत्ती १६:२१-२३.
सुरु-सुरुका केही ख्रीष्टियनले “यहोवाको दिन”-बारे गलत सोचाइ राखेका थिए।—२ थिस्सलोनिकी २:१, २.
परमेश्वरले तिनीहरू सबैको सोचाइ सच्याउनुभयो। उहाँले हामीलाई पनि त्यसरी नै सच्याएको चाहन्छौं र त्यसको लागि प्रार्थना पनि गर्छौं।—याकूब १:५.
^ अनु.2बाइबलको हाम्रो बुझाइमा परिवर्तन भयो भने हामी त्यो लुकाउँदैनौं। बरु त्यसको रेकर्ड राख्छौं र छाप्छौं। उदाहरणको लागि, अङ्‌ग्रेजी वेबसाइटको प्रहरीधरहरा अनलाइन पुस्तकालय-मा गएर अङ्‌ग्रेजीमा “विश्वासबारे स्पष्टीकरण” (“Beliefs Clarified”) टाइप गरेर खोज्नुहोस्।